Izindaba - Isakhiwo sensimbi
Indawo yokugcina impahla yensimbi yenziwa ngochungechunge lwensimbi, kufaka phakathi izinsika zensimbi, imishayo yensimbi, i-purlin njalonjalo. Lezi zinto eziyinhloko zakha isakhiwo esithwala imithwalo yokugcina impahla. Ngenxa yesisindo esincane nokwakhiwa okulula, kunesidingo esikhulu sendawo yokugcina impahla yensimbi. I-strucutre yensimbi nayo iyinhlobo yokwakha engabizi kakhulu kumaphrojekthi amaningi. Ngakho-ke, sekuyisikhathi sokuba utshale imali ezakhiweni zokugcina izinto zensimbi kusuka ekucabangeni kwezomnotho kwesikhathi eside.
Ukwakheka Kwensimbi Warehouse Design
Isakhiwo sensimbi ngokuvamile sithathwa njengendlela eyonga kakhulu futhi esheshayo yokwakha indawo yakho yokugcina impahla, okwenza kube inketho ephezulu ezakhiweni eziningi zezimboni nezomphakathi. Siphakela isakhiwo sendawo yokugcina impahla yensimbi, futhi kuya ngezicelo zakho ezithile kanye nemininingwane, izingxenye zensimbi zizokwakhiwa zibe ngamasayizi namasayizi ahlukahlukene.
I-warehouse yensimbi iwuhlobo lokwakha ifreyimu, isakhiwo saso sefreyimu ikakhulukazi esinezinsika nezinsika zensimbi. Isakhiwo sensimbi singenziwa ngokugingqika okushisayo noma okubandayo. Okophahla lwophahla nodonga, siphakela ishidi lensimbi, ingilazi yefayibha, izinketho zephaneli lesangweji nokunye. Isakhiwo sophahla lwensimbi esigobile futhi siyindlela enhle yephrojekthi yakho. Umnyango nefasitela lendlu yohlaka lwensimbi kungenziwa nge-PVC noma i-aluminium alloy. Mayelana nohlelo olusekela i-purlin, udonga nophahla lwe-purlin, uhlobo lwe-C nohlobo lwe-Z luyatholakala ongakhetha kulo. Ngaphezu kwalokho, ugongolo lomgwaqo we-crane runway wakhelwe ngokuya ngepharamitha yakho ye-crane ephezulu.
Mayelana nemfuneko yakho ethize yobukhulu bensimbi yokugcina impahla kanye nezimo zemvelo yendawo, indawo yokugcina impahla yensimbi ingakhiwa kunoma yisiphi isimo nosayizi ukuze ivumelane nezidingo zakho.
Kungani Kufanele Ukhethe Ukwakheka Kwensimbi?
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele ukhethe ukwakheka kwensimbi kokugcina impahla.
1.Cost esebenza kahle. Uma kuqhathaniswa nezakhiwo zikakhonkolo zendabuko, ukwakhiwa kwempahla yensimbi ngokuvamile kubiza kancane. Zonke izingxenye zizokwenziwa efektri, kufaka phakathi izinto zokubhola, ukusika nokushisela, bese kufakwa esizeni, ngakho-ke kuzonciphisa kakhulu isikhathi sokwakha.
Amandla amakhulu. Ukwakhiwa kwesakhiwo sensimbi kufaka indawo kakhonkolo oqinisiwe ngamacwecwe ensimbi noma izingxenye zensimbi, ezinamandla aphezulu nokumelana nokuzamazama komhlaba okungcono.
Ukuvikelwa kwemvelo. Indawo yokugcina impahla eyakhiwe ngensimbi iyasebenziseka kangcono kwezemvelo njengoba ingasetshenziswa kabusha kwamanye amaphrojekthi, ngakho-ke izonciphisa kakhulu imfucuza yokwakha.
Ukufakwa 4.Easy. Lezi zinqolobane zensimbi zingahlanganiswa kalula futhi zakhiwe ngabasebenzi, ngaleyo ndlela konga abasebenzi nezindleko zabasebenzi.
Ukuqina 5.High. Isakhiwo sensimbi singamelana nezimo ezinzima zemvelo, futhi ngendlela yokumboza ngopende ongacimi umlilo kanye nezinhlanganisela ze-aluminium, kuzovikela kahle umlilo nokugqwala. Ngakho-ke, inempilo ende yokusebenza.
Ukwethembeka okuphezulu. Isakhiwo sensimbi sikwazi ukuba nomthelela omuhle nemithwalo enamandla, kanye nokusebenza okuhle komhlaba. Ngaphandle kwalokho, ukwakheka kwangaphakathi kwensimbi kufana.
Isikhathi Iposi: Apr-01-2020